ReportersNepal-4 « रिपोर्टर्स नेपाल
इन्धनको मूल्य बढ्यो, निगमलाई अझै मासिक १ अर्ब ७६ करोड घाटा
चैत २२, काठमाण्डौ । नेपाल आयल निगमले आइतबार इन्धनको मूल्य बढाएको छ । भारतीय आयल निगमले पठाएको नयाँ मूल्यसूचीअनुसार निगमले आइतबार राति १२ बजेदेखि लागू
आहा रारा गोल्डकपमा एपीएफको पहिलो जित, सेमिफाइनलमा प्रवेश
चैत २१, काठमाण्डौ । विभागिए टिम एपीएफ क्लव आहा रारा गोल्डकपको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । उद्घाटन खेलमा घरेलु टिम सहारा क्लवलाई एक शुन्यको झिनो अन्तरले हराउँदै एपीएफले अन्तिम चारमा
प्रधानमन्त्री ओलीसँग देउवा र पौडेल रुष्ट, दिए कडा चेतावनी
चैत २१, काठमाण्डौ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेर बहादुर देउवाले प्रतिनिधिसभालाई प्रधानमन्त्री ओलीले आफु अनुकुल चलाउन खोजेको आरोप लगाएका छन् । शनिबार काठमाडौं नेपाल शिक्षक संघ संघीय कार्यसमिति कार्यक्रममा सभापति
चैत १९, काठमाण्डौ । विगत एक दशक भन्दा वढी लामो समयदेखि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सयौं सफल कार्यक्रमहरु आयोजना गर्दै आएका प्रदीपराज वन्तको तेस्रो म्युजिक भिडियो सार्वजनिक भएको छ ।
मोडल विन्दिया र विकल श्रेष्ठ अभिनित ‘सुनौलो दिन’ सार्वजनिक (भिडियोसहित)
काठमाण्डौ । हेम लामाको स्वर तथा विन्दिया श्रेष्ठ र विकल श्रेष्ठ अभिनित नयाँ गीत ‘सुनौलो दिन’ सार्वजनिक भएको छ । शब्द तथा मेलोडि शैलेन्द्र सिंह र आकाश महर्जनको रहेको गीतको
राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम : ४ हजार २ सय ५० विद्यालय छनौट
चैत १९, काठमाडौं । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयले राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमको योजनाको प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको छ । आज प्रधानमन्त्री निवास वालुवाटारमा आयोजित कार्यक्रममा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रबिधिमन्त्री कृष्णगोपाल
एनभीए कप भलिबलमा एपीएफ क्लबको विजयी सुरुवात
चैत १९, काठमाण्डौ । पाँचौ संस्करणको आरबीबी एनभीए राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लिग भलिबल च्याम्पियनसिपमा विभागीय टिम नेपाल एपीएफ क्लबले विजयी सुरुवात गरेको छ । त्रिपुरेश्वरस्थित राखेपको कर्भडहलमा बिहीबार
जुडो च्याम्पियनसिपका लागि भोलि ७ सदस्यीय नेपाली जुडो टोली किर्गिस्तान जाने
चैत १९, काठमाण्डौ । एसियाली÷ओसिएनिया जुडो च्याम्पियनसिपमा सहभागी हुन ४ खेलाडीसहित ७ सदस्यीय नेपाली जुडो टोली शुक्रबार किर्गिस्तानको बिस्केक प्रस्थान गर्दैछ । अप्रिल ४ देखि १० तारिखसम्म हुने प्रतियोगितामा १
बिमस्टेकका परराष्ट्रमन्त्रीहरुको १७औं बैठक : म्यानमारको हिंसाबारे सबै चुप
चैत १९, काठमाण्डौ । बहुक्षेत्रीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगको लागि बंगालको खाडीको प्रयास बिमस्टेकका परराष्ट्रमन्त्रीहरुको १७औं बैठक सम्पन्न भएको छ । बैठकमा म्यान्मारमा एक महिनादेखि भइरहेको नरसंहारको विषय उठ्ने अपेक्षा
काठमाडौं, चैत १३ । मस्तिष्क घातको उपचार गराइरहेका पूर्वमन्त्री तथा नेपाली काँग्रेसका नेता नविन्द्रराज जोशीको निधन भएको छ । जोशीको शुक्रबार राति ८:२४ बजे मृत्यु भएको हो । फागुन १४
थ्री नेसन्स कप अन्तराष्ट्रिय फुटबलका लागि नेपाली टिमको घोषणा, कोको छन् टिममा ?
चैत ११, काठमाण्डौ । नेपाली टिमका मुख्य प्रशिक्षक बाल गोपाल महर्जनले बुधबार गोलकिपर किरण चेम्जोङको कप्तानीमा २३ सदस्सीय टिमको घोषणा गरेका हुन् । गोलकिपर दीप कार्की, डिफेन्डर निशान खड्का, छिरिङ
नयाँ सरकार कि ओलीकै निरन्तरता ? सबै अलमलमा
चैत ११, काठमाण्डौ । गत फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय उल्ट्याइदिएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढल्ने अनुमान थियो । तर न अरु दलहरुले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन